Kitra – «THB champion’s league 2018»: hiatrika ny «poule des As » ny Cnaps sy ny Ajesaia ary ny Fosa Jr | NewsMada
Kitra – «THB champion’s league 2018»: hiatrika ny «poule des As » ny Cnaps sy ny Ajesaia ary ny Fosa Jr
Efa nahazo ny tapakila hiatrehany ny dingana farany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “poule des As” ny ekipa telo, eo amin’ny taranja baolina kitra. Mbola miandry ny andro farany kosa vao ho fantatra ny ekipa fahefatra farany.
Tontosa, omaly alarobia, ny andro fahatelo eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Ekipa telo ny efa tafita hiatrika ny “poule des As”. Efa nahazo ny tapakilany amin’izany ny Cnaps Sport Itasy sy ny Ajesaia Bongolava ary ny Fosa Jr Boeny.
Teny amin’ny kianja Vontovorona, mbola nahazo fandresena fanintelony indray ny Fosa Jr, rehefa nanintsana ny Tam Port-Bergé, tamin’ny isa mazava 5 no ho 1. Vao nanomboka kely monja ny lalaon’ny roa tonta, efa nahatafiditra baolina ny Fosa Jr, saingy 2 mn monja taorian’izay, nosahalain’ny Tam izany.
Nihevitra ny rehetra fa hiady ny fihaonana ary hanohitra ny tovolahin’i Port-Bergé. Tsy izay anefa ny zava-nisy fa nisesy ny baolina nampidirin’ny Fosa Jr ka 4 no ho 1 ny nentin’ny roa tonta niala sasatra. Mbola nanampy baolina iray indray ry zalahy, teo amin’ny tapa-potoana faharoa. Manana isa sivy izany ny Fosa Jr, taorian’ity fihaonana ity.
Nahazo fandresena ihany koa ny Jet Mada Itasy, nandavo ny FCA Alaotra Mangoro, tamin’ny isa 4 no ho 1. Mbola hiadian’ny Elgeco Plus sy ny Jet Mada kosa ny toerana fahefatra. Hiankina amin’ny vokatra eo amin’ny andro roa sisa farany ny hahalalana izay ho tafita amin’izany.
Nandravarava ny Ajesaia
Tany Fianarantsoa, nomontsanin’ny Ajesaia, tamin’ny isa mavesatra 11 no ho 0, ny Fils Elephant ary resin’ny Cnaps, tamin’ny isa 3 no ho 1, ny 3FB Atsimo Andrefana. 2 no ho 1 kosa ny nanilihan’ny FC Vakinankaratra ny Akon’Ambatomena. Samy nahazo isa sivy ny Ajesaia sy ny Cnaps Sport, efa samy tafakatra amin’ny dingana manaraka.
Hitohy, rahampitso zoma, ny andro fahefatra ka etsy Vontovorona, hifampitana ny Elgeco Plus sy ny FCA ary ny Jet Mada sy ny Tam Port-Bergé. Any Ampasambazaha no hidona ny Akon’Ambatomena sy ny 3FB ary hiady lohany ny Ajesaia sy ny Cnaps Sport. Hifanazava kosa ny Fils Elephant sy ny FC Vakinankaratra.